I-Semalt Expert: Indlela Yokuyila Ngokufanelekileyo I-Business Business
Ngokutsho kophando lwe-MIT Sloan Management Review kunye neYunivesithi yaseDeitteCinezela, amashishini amaninzi akulungele ukuya kwi-intanethi. Kule sifundo, malunga ne-44% yabantu abahlolisweyo (abahlalutyi abangama-3700, abaphathi nabaphathi),Yenza kucacile ukuba iifemu zabo zazikulungele ukuphazamiseka kokusebenza emva kokuqaliswa kweendlela ezintsha zedijithali. Nangona kunjalo, ama-56%Abaphenduli abazange bazive belungele ukutshintshiselwa kwedijithali kwaye bachasa iindlela ezintsha.
Ukwenza i-platform yedijithali kunokuthetha kakhulu kwi shishini. Ngokomzekelo, uphando oluthileInkqubo yokuSebenza kweeInjini (SEO) kwandisa isiseko sabathengi bakho. Ukuhlaziya ibhizinisi lakho kunokuba yinto entle kwisicwangciso saso sesikhathi eside - τιμη του βασιλικου πολτου.Ukuba ingaba le nto ishintshi iya kwenzeka kwishishini lakho, udinga ukuyila okanye uhlobo lomfanekiso wexesha elide. Imiba eninziziyakuthi ziphakame, okuqhelekileyo xa kukho nayiphi na inhlangano iguqula. Ngenxa yoko, ukubeka izicwangciso ezicacileyo ekujonganeni nolu hloboIintsimbi ziba ngumsebenzi owongezelelweyo, onokuzixabisa imizamo.
uMax Bell, uMphathi weMpumelelo yoMthengi iSemalt ,ucacisa imiba yokuyila ibhizinisi ledijithali eliphumelelayo.
Uyilo lokuCinga lukhuthaza ukuBambisana kunye neNtsha
Xa wenza imodeli yoyilo, inkqubo iquka ukukhangela isisombululo usebenzisa isethi esinikeziweyoyeerameters umthengi ufuna. Impendulo ayilucacile, ukufezekisa inokukwazi ukusebenzisa imigaqo ethile yokwenza ingqiqointsebenziswano phakathi kwamaqela achaphazelekayo ngenguqu. Ngokomzekelo, xa ukwenza ukuthengiswa kwe-digital, imibutho inokwenzekakufuneka baqeshe iingcali ze-SEO kunye nokufundisa abasebenzi babo kwiindlela ezimbalwa zokuthengisa izitoreji zokuthabatha abathengi..Kwamhlanje,Abathengi baninzi bavela kwi-intanethi. Le nto ithetha ukuba iiwebhusayithi zitshintsha ngokuthe gqolo izitolo zenyama.
Uyilo lokucinga luquka ukubandakanya yonke imiba yombutho ukuba isebenze kunyeukwenza isisombululo kwento ethile. Iquka ukubandakanya iingqondo ezahlukeneyo ukujonga ingxaki ethile malunga nezixazululo ezizayo. Ngenyengongoma, iingcamango zendlela eyahlukileyo zidibanisa ukunika ibhizinisi ingqiqo ebalulekileyo yokusebenza kwangomso. Ngokomzekelo, iukusebenzisana kwe-MU / DAI kunye ne-SalesForce ngokulwa nokulwa kwama-marine.
Kule nkalo, ukubiza kwiqela letheknoloji linokuba yimveliso ebalulekileyo. Ezininzi iinkaloyoyilo kunye nokulungelelanisa kwiplatifti yedijithali kufuna ezinye iingcali ezinolwazi kunye nolwazi olufanelekileyo ukujongana nemiba. Njengokuba,Ukusebenzisana phakathi kwamagosa eenkampani kunye namaqela e-SEO kunokukhokelela ekwakhiweni kwewebhusayithi ephendulayo, engagqibekanga kuphela, kodwaunako ukutshintsha indawo yesitolo. Kule ndlela yokucwangcisa, ukucinga okubalulekileyo kuyimfuneko kuba ukuguquka kunokuquka ukutshintshaabasebenzi, iincwadi kunye nezinye izinto ezininzi.
Ukuyila Ukucinga ngumbono wehlabathi jikelele, onokukunceda uninzi lwemibutho yokucwangcisalabo kwikamva. Inceda abantu abahlukeneyo ukuba bazise iingcamango ezahlukeneyo kunye nezisombululo. Uyilo lokucinga lunokufaka izicelo ezininziamashishini, kwaye kuya kwenzeka ukuba abantu abahlukeneyo bayithatha ngokuhlukile. Ukuyila ukucinga kukunceda ibhizinisi lakho lisombulule ixesha elideimiba kunye nokuhamba kwezinye zeengxaki ezikhoyo. Ukutshintsha abantu kunzima, kodwa kunokuba ngumsebenzi onelungelo kwabanyematyala. Ukuyila ukucinga kukunceda abantu bafumane uluhlu olubanzi lwezinto zokudala kunye nokufumana inqanaba elongezelelweyo lokubambisana.Ngokusebenzisa iingcebiso kweli nqaku, kunokwenzeka ukuba ufumane inkqubo yokucinga eyiyo. Iyakwazi ukugqwesa ngokuguqulaiindlela zedijithali.